Zipu otu edemede n’elu ikpo okwu ọdịbendị Afrikhepri - Afrikhepri Fondation
Zipu otu edemede n’elu ikpo okwu ọdịbendị Afrikhepri
Afrikhepri bụ usoro ọdịbendị nke ọdịmma ọha na eze maka ịkekọrịta ihe ọmụma. Ọ naghị arụ ọrụ maka abamuru nke ndị amachibidoro ndị mmadụ kama maka ọdịmma izugbe. Ọ na-achọ ịkwalite ọdịbendị gburugburu ụwa site na ebe nrụọrụ weebụ ya iji dozie ọdịiche dị n'etiti ndị mmadụ ma weta nghọta dị iche iche na usoro ọhụrụ.
Pịa n'okpuru akara ngosi nke ịchọrọ ka ijikọ ma bipute edemede ma ọ bụ vidiyo n’elu ikpo okwu ọdịnala a
Pịa n'okpuru ka biputere otu edemede na saịtị ahụ
Eziokwu ahụ ka a ga-ekpughere nye mmadụ niile n'ihi na "anyị anaghị enwu oriọna iji dọba ya n'okpuru ohia, kama anyị na-etinye ya na oriọna oriọna ahụ, ọ na-emekwa ka ndị niile nọ n'ụlọ mara ihe". N'ihi ya, ọrụ anyị bụ ịkọrọ ụmụ Kama niile ihe ọmụma ka ìhè wee nwee ike ịnye ndị niile bi n'ụlọ nke ndụ ìhè (Per Ânkh).
Atiya Nwee obi ụtọ mmezi AKWỤKWỌ AFRICAN Egwuregwu ndị enyi ojii akwụkwọ ỤMỤAKA gburugburu ebe obibi Ịgba ohu Ihe ndi ozo ỤLỌ NNA Ụmụ nwanyị AFRICA MGBE NA-ECHI OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ N'ỤLỌ AFRICAN Ndebanye / nbanye NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ PARADIGM KAMIT
Isi Academy Paris, bụ ụlọ akwụkwọ ntutu isi nke mbụ na Afro na European ntutu
Ọ dị ezigbo mkpa ka nwa amụrụ ọhụrụ were ara nne n’oge a mụrụ ya
Iwu nke Chineke n'usoro nke ndi akpagbu
Okwu ime mmụọ Maasai: okwu nke Kenny Matampash Ole Meritei